Noqo Maalin Koobid Warbaahinta - Geofumadas
Hadda waxaan leenahay maalinta kowaad, ka hor intaan la soo dajin, oo loogu talagalay saxaafadda; iyadoo leh isbeddellada ugu muhiimsan ee Bentley Systems ay filayaan inay u guuraan heerka saxaafadda.
Hadda, dareenka ugu horeeya.
Pointools waxay umuuqataa inay tahay helitaanka ugu fiican Bentley, sidaan qabo. Shirkad muhiim ah oo Agaasimihii hore ee Bentley, Joe Croser, u aaday, shaqo xiiso leh, taas oo kaliya danta Bentley iyo AutoDesk u dhaqaaqin wadashaqeyn wada jir ah oo ku saabsan maaraynta xogta dhibcaha daruuraha laakiin sidoo kale istiraatiijiyad loogu talagalay dhex dhexaadnimo taageero leh alaab-qeybiyeyaasha ugu muhiimsan ee loogu talagalay soo qabashada xogta.
Bentley Descartes V8i waxaa loogu yeeray DTM on steroids. Waana in Bentley ay umuuqato inay ku faani doonto (markale) sababta inbadan oo adeegsadayaasheeda daacad ah ujecelyihiin: xoojinta barxada si ay ula tacaalaan xogta duulista. Sidaa darteed 680 milyan oo dhibic, oo ah qaab dhul dijitaal ah iyo sawir qafiif ah oo ku yaal TIN, oo leh soo dhaweyn xoog leh iyo digsi waxay noqon kartaa barbaro weyn oo laga helo V8i.
Isbeddellada kale ayaa lagu calaamadeeyay Hypermodels, oo ah hab loogu yeero BIM iyada oo la tixgelinayo halmaansiinta diyaaradaha 2D, si loola macaamilo jarista iyo iskutallaabyada qaybaha meel kasta oo gebi ahaanba firfircoon. Tan, iskudhafka codsiyada juquraafiyeed, oo leh qaab joomatariyeedka waddooyinka, qaabeynta qaabdhismeedka iyo jilitaanka isticmaalka tamarta ayaa ah qiiq. Waxaan ka hadlayay dhowr sano ka hor, waana fikradda qaabka kaliya, iyada oo aan loo eegayn inta qof ama codsiyada la taabto feylka ... Hal One Model ... Waxyaabo dhowr ah.
Isbeddelku wuxuu ku sii socdaa geedi socod dhammaystiran oo ah abuurista, daabacaadda, ilaalinta iyo u qaybinta xogta laga helo desktop-ka ilaa daruurta, iyadoo aan laga fekerin feylasha laakiin tusaalooyinka dhabta ah. Bentley wuxuu si fiican u dhigay Microstation, hadda wuxuu rabaa inuu ku sameeyo 'ProjectWise' ... waqtigaasna wuxuu noqon doonaa AssetWise ... laakiin weli ma ahan.
Ugu dambeyntiina, in kasta oo galabnimadu ay yar tahay, dhaqdhaqaaqa ayaa ku jira isbeddel aan laga soo noqon karin. Isbahaysiga ama la soo wareejinta AECO iyo Tekla waxay umuuqdaan inay ka bislaadeen codsiyada fudud ee illaa iyo hadda lagu dhejiyay ApStore ee iPad. Awooddu waxay ku jirtaa ProjectWise, oo ay ku doonayaan inay ka qaataan maareynta xogta I-moodooyinka si ay u noqoto mid isku xiran oo la wada shaqeyn karo oo run ahaantii ka faa'iideysan doona qof walba.
La soo wareegitaannada kale sida Formsys waxay sii wadaan maareynta nidaamyada batroolka, hadda oo ay ku jiraan aalado sabeynaya. Marka laga hadlayo maaraynta Raceway iyo Cable, waa qiyaas kale oo fikradda BIM ah, taas oo ku dhowaad wax walba ay ku xiran yihiin sida dunida dhabta ahi tahay.
Waxay soo jiidanaysaa dareenka isbahaysiga qiimaha leh, sida kiiska AutoDesk oo muddo dheer sii soconaya in loo maareeyo lammaane istiraatiiji ah halkii laga tartami lahaa (waa loo maleynayaa), ka hor intaanay ka hadlin isdhexgalka Revit, hadda waxay xusayaan Civil 3D. Isdhexgalka ayaa cadeeya waana wax la fahmi karo labada weyn, inkasta oo maalin kasta aan aragno isku soo dhawaansho badan oo Microsoft ah, oo mustaqbalka saameyn weyn ku yeelan kara maaddaama Bentley Systems ay sii ahaaneyso shirkad weyn oo caalami ah oo madax u ah dhaxalka qoyska (waa maxay dhaxalka ).
Qiyaastii 70 wakiilo warbaahineed oo ka socda 20 dal ayaa halkan u jooga inay iskaga dhaadhiciyaan indhaheenna. IPadku wuu istaagaa, wuxuu ku sii badanayaa tifaftirayaasha, sidoo kale tweeter, aad uga fiican sannadkii hore; hashtag waa #BeIn2011 oo waxaad sii wadi kartaa inaad ka warqabto ku dhowaad daqiiqad.
Post Previous" Hore Geofumadas ... macno ahaan duulimaadka
Post Next Miyaynu haysannaa Microstation-ka Mac?Next »